Glass mmanya na-egbu mmanya / ite Manufacturers, Suppliers - China Glass Liquor Bottle / ite Factory
200ml matte nwa ntekwasa karama karama mmanya karama na aluminum mkpuchi
Ekpukpo karama 200ml bụ karama ọdịnala eji eji ọgwụ na ọgwụ sirop, ma a na-ejikarị ya maka whiskey na mmanya ndị ọzọ na mmanya, mmanụ na mmanụ. A na-eji karama dị elu emee karama karama ahụ, yana atụmatụ ya na-enye gị ọtụtụ ebe dị larịị enwere ike iji ya mee ihe maka itinye akara karama. Anyị na-enyekwa mkpuchi luminom maka karama.
750mL Antique Green Bordeaux Wine Karama
750ml karama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ karama Fuchsia / Bordeaux ịke karama mmanya mmanya na-acha akwụkwọ ndụ bụ nhọrọ kachasị maka ụdị Bordeaux dị ka Bordeaux Cabernet Sauvignon na Cab Franc.
Zọ dị mfe ma dị mma iji gbanye biya biya. Ihe ndị a 16.9 oz karama tụgharịrị bụ ụzọ dị mfe na ụzọ dị mfe iji gbanye biya biya n’enweghị okpu! Ndị na-eme biya dị ka ọrụ na njikwa akụkụ nke karama ndị a na-enye. Ha dị mfe ihicha ma dịkwa ngwa ma dịkwa mfe iji. 500 mL (16.9 fl oz) karama amba nke nwere plastic / ceramik tụgharịa okpu.
Anyị na-enye nkwakọ ngwaahịa omenala!
330ml ogologo olu amba biya karama
A na-eji karama amị amị amịpụta 330ml nke iko amba dị elu. Ha nwere nhazi oge ochie ma nwekwaa uru ọzọ nke iji iko amba. Ha dị mma maka ụlọ gị niile nwere ụlọ, wee mee karama zuru oke dị ka onyinye maka gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ karama azụmahịa maka ụlọ ahịa na-ere ahịa, karama mmanya biya ga-enye gị ngwọta bara uru.
Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Clear Glass mgbapụta karama, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass kalama na mgbapụta Dispenser, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Iko karama na ịgba nfuli,